Umsindo ngokuvula kothisha - Ilanga News
Home Izindaba Umsindo ngokuvula kothisha
Umsindo ngokuvula kothisha
Inyunyana ithi ngeke ivumele amalungu ayo ayofa ngenxa yepolitiki
Ngakwesobunxele nguNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo uNkk Angie Motshekga noNobhala weNatu, uNkk Cynthia Barnes othi ngeke bavume amalungu abo adedelwe ekufeni ngokuthi kuthiwe mawaye emsebenzini.
KUQUBUKA umsindo ngokubuyela kothisha ezikoleni njengoba iNational Teachers’ Union (Natu) isivimbe amalungu ayo ukuba aye emsebenzini, ikhala ngokuthi akuphephile, iCovid-19 iqoba iyavungula. Kulindeleke ukuba abaphathi bezikole babuyele emsebenzini namhlanje ngo-Msombuluko kanti izindimbane zothisha zona kufanele zibuyele mhla ka-1 kuNhlolanja (February).
UNobhala-jikelele weNatu, uNkk Cynthia Barnes, uthe asetsheliwe amalungu ale nyunyana ukuba angazikhathazi ngokubuyela emsebenzini ngalezi zinsuku ezibekwe wuhulumeni. Uthe konke okwenziwe wuMnyango wezeMfundo eyisiSekelo ukulungiselela ukuthi ezikoleni kuphephile, kukhombisa ukungahleleki, kusobala ukuthi kuhloswe ngakho ukuqeda ngempilo yothisha.
Uveze ukuthi ngisho izinsuku okuthiwa othisha mababuyele ngazo emsebenzini, akuzange kuxoxwe nezinyunyana, kuthathwe isinqumo ngokuvumelana, umnyango uzinqumele wona.
“Ukuhlehliswa kokuvulwa kwezikole kwenziwe ngenxa yokubonakala kokudlanga kwalo mkhuhlane, sekushiya imibuzo ukuthi kungani othisha bebuyiselwa emsebenzini kusasele amasonto amathathu wonke zingakafiki izingane. Akukaze kwenzeke lokhu emlandweni.
“Ngeke sivumele othisha beyofa ngenxa yepolitiki yabaphathi bezwe ekubeni bona yilokhu balivala nyakenye iphalemende ngoba besaba ukuhlangana,” kusho uNkk Barnes.
Uthe ngaphansi kwemigomo yokusebenza kothisha, akukho lapho okunesifungo khona sokuthi kumele basebenze ekufeni futhi kabazona izisebenzi zezempilo. Uveze ukuthi isixazululo mayelana nokubuyela kothisha emsebenzini wukuthi bathole umjovo wokugomela iCovid-19, ngale kwalokho kabalubhadi.
Utshele ILANGA ukuthi bangaphezulu kuka-2 000 othisha abadlule neCovid-19. Uthe abukho ubufakazi bosolwazi bezempilo obuthi njengamanje kwehlile ukushona kwabantu ngenxa yeCovid-19.
“Izikole zingavulwa nangoNhlaba (May). Kumthethosisekelo akukho lapho okuthiwa khona kuyimpoqo ukuvulwa kwezikole uma kuqala unyaka. KwaZulu-Natal baningi othisha abashonayo, okusho ukuthi uma beyohlangana nabanye esikhathini esinje, kubekwa impilo yabanye engcupheni,” kusho yena.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo, uMnu Ellijah Mhlanga, uthe izinyunyana zothisha zinelungelo lokubeka umbono wazo kwazise iNingizimu Afrika iyizwe elikhululekile. Uthe ngokwezinhlelo zomnyango, kubuyelwa ezikoleni ngezinsuku ezibekiwe.
Abafundi bazobuyela emadeskini mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Imizamo yokuthola uNobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, ukuzwa ukuthi awabo amalungu ayaya yini emsebenzini, iphunzile njengoba ucingo lwakhe belungabanjwa.
Isazi sezemfundo, uMnu Khumbulani Mngadi, ongumqondisi ehhovisi lezokuqondiswa nokuthuthukiswa kolimi e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), sithe ukubuyela kothisha nabafundi ezikoleni akusilona icebo elihle okwamanje. Sithe nyakenye ngesikhathi kuhlasele isivunguvungu sokuqala seCovid-19, uhulumeni wahluleka ukuqinisekisa ezokuphepha ezikoleni, okwenza kube novalo olukhulu njengamanje ngenxa yamandla alo mkhuhlane.
“Njengamanje othisha bahaqekile, uma sekubuyela nezingane kuzokwenzekani emakhaya kubantu abadala? Ngokwami bekungalindwa kubuyelwe ngoNhlangulana (June) ngenxa yokuthi indlela okufiwa ngayo okwamanje iyathusa. Empeleni nyakenye sasithuswa wubala, kwamoshwa imali eningi kuthengwa izinto, ngakho-ke uhulumeni bekunga-ba kuhle uqinise izihlaka zawo zokuphepha okwama-nje,” kusho uMnu Mngadi.
Previous articleSilambele imiklomelo isilomo seChiefs
Next articleImpi yamazwi kuZimdollar nensizwa ebigunda igceke